Tuubbo-gelinta Wadnaha: Sida Guriga loogu daryeelo
Waa maxay tuubbo-gelinta wadnaha?
Tuubbo-gelinta wadnaha waa tuubbo (ama caag dhuuban oo) sidii dun oo kale wadnaha loo geliyo iyadoo xidid ama halbowle loo sii marsiiyo. Tuubbada waxaa la geliyaa labada sarac midkood ama labadaba. Mararka qaarkood meelo kale ayaa la geliyaa, sida cududda ama luqunta.
Tuubbo-gelinta wadnaha waxaa loo isticmaalaa in lagu baaro dhibaatooyin la xiriira qulqulka dhiigga iyo qaabab-dhismeedka wadnaha, ama waxaa lagu furaa ama lagu xiraa qeybo ka mid ah qaabab-dhismeedka wadnaha. Waa la hurdeysiin doonaa ilmahaaga ama waa la suuxin doonaa si dhib yari hawsha loogu qabto inta ay socoto. (Eeg waraaqda kuu sharxaysa “Suuxinta qalliinka/baarista.”)
Baarista ka hor maxaan sameynaa?
Da’ kasta ilmaha iyo dhallinyarada yaryar guriga ayey ka soo qaadan karaan alaab ay ku ciyaaraan oo lagu mashquuliyo. Wax uu daawado iyo qalab uu ku daawado oo loo soo qaado ayaa ilmaha ku caawin karta in ay aayar u seexdaan qalliinka ka dib.
Qalliinka ka dib maxaan filan karnaa?
Kalkaalisada ayaa marar badan eegi doonta xaaladda ilmahaaga (garaaca wadnaha, cabbirka neefta, kuleylka ama xaraaradda jirka, cabbirka dhiigga) iyo garaacistaa qulqulka xididdada dhiigga ee cagaha, lugaha iyo/ama cududda.
Faashad ayaa ilmahaaga laga saari doonaa meeshii tuubbada laga galiyey. Haddii aan laga furin faashadda waa inaad uga furto _______ maalmood ama _______ saacadood.
Muxuu ilmahaygu cuni karaa?
Wuxuu ilmahaagu cabbi karaa cabitaan khafiif ah (sida jalaato la dhuuqo oo bac ku jirta, biyo, tufaax ama canabka noociisa cad oo miiran, maraq, cabitaan ama soodha aan aasidh lahayn. Haddii aadan ilmahaaga ku arkin matag, raashinka kale si aayar ah ugu sii kordhi hadba sidii uu u qaadan karo.
Muxuu ilmahaygu qaban karaa?
Qalliinka ka dib 2-da maalmood ee ugu horreysa waa in uu ka fogaado ciyaaraha isboortiska ah ee la isku dhaco, ciyaaraha xoog la adeegsado, ama wax kasta oo ku keeni kara in uu dhaco. Ha u oggolaan:
baaskiil ama wax la mid ah oo la raaco
xiisadaha jimicsiga jirka ah ee iskoolka
qaadidda wax culus
Goorta aan dhakhtarka wadnaha la soo xiriirayo waa marka aan arko…
calaamado hurgun ah
meesha dhaawaca ah oo sii xumaata
haddii aan lugtii ama cududdii laga muday ku aragto qabow ama inuu midabkeedu isu beddelo mid cad ama madow oo aan caadi ahayn
haddii uu dhiigbax ku yimaado
Warqaddan ilmahaaga gaar kuma aha ee waa mid aad ka heleyso macluumaad guud ahaaneed. Haddii aad wax su'aalo ah qabto fadlan la soo xiriir kilinigga daaweynta wadnaha.